Sheekada filimka Raja the Great: Ravi Teja doorkiisa camoolenimo wuxuu ku mudan yahay in bilad lagu siiyo | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Raja the Great: Ravi Teja doorkiisa camoolenimo wuxuu ku mudan yahay in bilad lagu siiyo
Superstar Ravi Teja wuu soo laabtay waxaana tiyaatarada u saaran filimka la wada amaanay Raja the Great ee uu ku jilaayo door indhoole ama camoole ah waana filim Telugu ah.
Jilaayaasha filimkaan: Ravi Teja, Mehreen Pirzada, Vivan Bhatena, Raadhika, Tanikella Bharani iyo Prakash Raj
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 29-daqiiqo.
Fariinta Filimka Raja The Great Oo Kooban: Lucky (Mehreen Pirzada) wa gababar qurux badan sidoo kalena siweyn u ilaaliyo una jecel yahay aabaheed askariga ah SP Prakash (Prakash Raj).
Sarkaal SP Prakash (Prakash Raj) hawlgaladiisa mid ka mid ah wuxuu kusoo qabanaa tuuga awooda badan Devaraj’s (Vivan Bhatena) meeshaas dhibaato kagama horeyso qoyskaan.
Devaraj’s (Vivan Bhatena) oo careesan wuxuu ka aargudanaa sarkaal SP Prakash (Prakash Raj) asigoo nafta dhaafinaayo kadibna wuxuu bartilmaameed ka dhiganaa sarkaal SP Prakash (Prakash Raj) gabadhiisa Lucky (Mehreen Pirzada).
Lucky (Mehreen Pirzada) wey ka baxsaneen dilkii lala maaganaa waxayna imaanee ayadoo baxsad ah guriga Prasad’s (Rajendra Prasad) oo ay aabaheed saaxiibo ahaan jireen.
Booliska qayb ka tirsan ayaa loo diyaarinaa inay ilaalo gaar ah siiyaan sidoo kalena amaankeeda sugaan gabadha dhibanaha ah Lucky (Mehreen Pirzada).
Dhinaca kale Raja (Ravi Teja) waa wiil indhoole ah waxaana tababar karti iyo is bad baadin ku dheehan siisay hooyadiis Anantha Lakshmi (Radhika) waxayna rabtaa wiilkeeda inay boolis ka dhigto.
Hooyo Anantha Lakshmi (Radhika) waxay la kulmeysaa sarkaalka ciimada booliska ugu sareeyo I.G. (Sampath Raj) waxayna ka codsanee in wiilkeeda Raja (Ravi Teja) lagu daro kooxda sida gaarka ah loo tababaray ee amaanka Lucky sugayaan.
Raja (Ravi Teja) asigoo wax amar ah u qabin ayuu si xoog ku dheehan kaga mid noqonaa kooxda Lucky ilaaliso marar badan ayuuna halis ka bad baadinaa.
Sidaa darteed ninkii indhoolka ahaa Raja (Ravi Teja) wuxu nafsadiisa halis u galina bad baadinta gabadha aabaheed la dilay sidoo kalena iyadana nolosha loo diidan yahay.
Raja riyada hooyadiisa ma rumeyn doonaa ma noqon doonaa askari booliska ka tirsan?
Raja ma bad baadin doonaa Lucky oo nafsadeeda halis ku jirto xili walbo?
Raja madaama uu indhool yahay lixaadiisa taam ahayn siduu isaga celin karaa tuugada awooda badan ee dilalka qarsoon iyo midka tooska ah u maleegaan kuwa kasoo hor jeestaan?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Raja The Great: Waa filimkii aad u baahneyn sidoo kalena aad kaga baratay Telugu madaama uu leeyahay Action, mada daalo iyo shactiro dhan walbo ka dheeli tiran..
Director Anil Ravipudi qaybta hore filimkaan si wacan ayuu ugu dadaalay waayo shactirada ayaa heer sare ah halka qaybta labaad Action-ka iyo qiirada loo badiyay balse xoogaa caajis ayaa ka muuqdo.
Sida guud Raja The Great shactiradiisa oo heer sare ah iyo bandhiga dhamaan jilaayaasha filimkaan ayaa ku hilmaan siin doonto dhaliilaha yar yar ee uu leeyahay filimkaan.
Bandhiga Jilaayaasha: Mass Maharaja Ravi Teja si aan caadi ahayn ayuu doorkiisa dhibka badan kaga baxsaday waxaana loo maleeyaa camoole ama indhoole run ah.
Waxaaba ugu wacan shactirada uu sameenayo iyo hadaladaha uu adeegsanayo oo dhan walbo laga diyaariyay waa hubaal in feestada Diwali taageerayaashiisa xidigaan siweyn kaga farxinaayo.
Mehreen waa xidig banaanka iskeentay waxaa weli la hadal haayay doorkeedii wacnaa filimka Blockbuster-ka weyn noqday Mahanubhavudu, haatana bandhig kale oo qurux badan ayay filimka Raja The Great ka muujisay.
Laadarka filimkaan Vivan Bhatenaa isaga door wacan ayaa la siiyay halka dhamaan jilaayaasha kale iyagana bandhigoodda iyo qaybaha la siiyay si wacan loo diyaariyay.
Gunaanad: Raja The Great waa filim uu ku mudan yahay Ravi Teja in abaal marin lagu siiyo madaama uu bandhig heer sare ah ku muujiyay sidoo kalena waa filim fariintiisa sahlan tahay balse si wacan la isugu daba riday.
Dadka filimada ka faaloodaan waxay siiyeen sedex xidig filimka Raja The Grea (3/5) sidoo kalena daawadayaasha si wacan ayay kaga heleen waxaana loo badinaa in Ravi Teja filimkiisa guul wacan gaari doono marba hadii laga wada helay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Raja The Great: